Muxuu yahay axdiga cusub? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Qaabkeeda aasaasiga ah, axdi ayaa nidaaminaya xiriir wada-jir ah oo ka dhexeeya Ilaah iyo aadanaha si la mid ah sida axdi caadi ah ama heshiis uu ugu lug leeyahay xiriir u dhexeeya laba qof ama in ka badan. Axdiga cusubi wuxuu dhaqan galay maxaa yeelay Ciise baayaabihii dhintay. Fahmitaanka tan waxay muhiim utahay qofka rumaystaha ah maxaa yeelay dib u heshiisiinta aan helnay waxaa suurto gal ah oo kaliya "dhiiggiisa iskutallaabta dusheeda", dhiigga axdiga cusub, dhiigga Ciise Rabbigeenna (Kolosay 1,20).
Fikirkee ayaa u?
Waa muhiim in la fahmo in axdiga cusub uu yahay fikirka Eebbe iyo in uusan ahayn fikrad uu binu-aadamku qaatay. Masiixu wuxuu xertiisii ​​u caddeeyey markuu aasaasay Cashada Rabbiga: "Kanu waa dhiiggayga axdiga cusub" (Markos 14,24:26,28; Matayos). Kanu waa dhiiggii axdiga weligiis jira » (Cibraaniyada 13,20).
Nebiyadii axdiga hore waxay sii sheegeen imaatinka axdigan. Ishacyaah wuxuu sharraxayaa ereyada Ilaah "kan wax quudhsada oo quruumuhu necbahay, iyo addoonka khaa'inka ah ... Waan idin ilaaliyay oo axdi baan dadka u sameeyey; (Ishacyaah 49,7-8; sidoo kale eeg Ishacyaah 42,6). Tani waa tixraac cad oo loogu talagalay Masiixa, Ciise Masiix. Isaga oo Ishacyaah Ilaah wuxuu sidoo kale saadaaliyay: "Waxaan iyaga ku Abaal marin doonaa aaminnimo iyo axdi weligiis ah ayaan iyaga la dhigan doonaa" (Ishacyaah 61,8).
Yeremyaah sidoo kale wuxuu ka hadlay oo yidhi, Bal eega, waxaa soo socda wakhtigii laygu lahaa, ayaa Rabbigu leeyahay, oo anigu axdi cusub baan samayn doonaa, kaasoo aan ahayn sidii axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale markii aan gacanta ku qabtay. si uu Masar uga soo bixiyo » (Yeremyaah 31,31-32). Tan waxaa mar kale loogu yeeraa "axdi daa'im ah" (Yeremyaah 32,40).
Yexesqeel wuxuu ku nuuxnuuxsaday dabeecadda heshiisiinta ee axdigan. Wuxuu xusayaa cutubka caanka ah ee Kitaabka Qudduuska ah ee ku saabsan "lafaha engegay": "Oo waxaan doonayaa inaan iyaga axdi nabadeed la dhigto, waxay noqon doontaa axdi weligiis iyaga lala jiray" (Yexesqeel 37,26).
Maxaa axdi loo galay?
Qaabkiisa aasaasiga ah, axdigu wuxuu muujinayaa xiriir wada-jir ah oo ka dhexeeya Ilaah iyo aadanaha si la mid ah sida axdi caadi ah ama heshiis uu ugu lug leeyahay xiriir u dhexeeya laba qof ama in ka badan.
Tani waa mid ku khaas ah diimaha maxaa yeelay dhaqammada qadiimka ah ilaahyadu badanaa xiriir lama macno ah lama leh ragga iyo dumarka. Yeremyaah 32,38 wuxuu sheegayaa dabeecadda dhow ee axdigan axdiga: "Waa inay noqdaan dadkayga waxaanan rabaa inaan noqdo Ilaahooda".
Frets waa la isticmaalay walibana waxaa loo isticmaalaa ganacsiga iyo macaamil sharciyeed. Waqtigii Axdigii Hore, caadadii reer binu Israa'iil iyo caadadii jaahilka ahayd waxaa ka mid ahaa ansixinta axdiyada aadanaha oo leh dhiig iyo in ka yar nooc kasta oo lagu xoojinayo bondiga iyo heerka bilowga ee heshiiska. Maanta waxaan aragnaa tusaale dheer oo fikradan ah markii dadku isweydaarsadaan caado ahaan si ay u muujiyaan sida ay uga go'an tahay axdiga guurka. Iyagoo raacaya saamaynta bulshadooda, jilayaasha Kitaabka Qudduuska ah waxay adeegsadeen dhaqamo kala duwan si ay jir ahaan ugu adkeeyaan xidhiidhka axdiga ay la leeyihiin Ilaah.
"Way iska cadahay in fikirka xidhiidhka axdiga in uusan ahayn mid qalaad ee reer binu Israa'iil, sidaa darteed la yaab malaha in Ilaah u adeegsaday qaabkan xiriirka si uu u muujiyo cilaaqaadka uu la leeyahay dadkiisa" (Dahabka 2004: 75).
Axdiga Ilaah ee u dhexeeya isaga iyo bini-aadamka waxaa loo barbardhigi karaa heshiisyada noocan oo kale ah ee lagu sameeyo bulshada dhexdeeda, laakiin ma leh darajo isku mid ah. Axdiga cusub malaha fikradda gorgortanka iyo is-weydaarsiga. Intaa waxaa u dheer, Ilaah iyo binu-aadamku maahan kuwo siman. «Axdigii rabbaaniga ahaa wuxuu ka gudbay shaxdiisa (Dahab, 2004: 74).
Inta badan dawooyinka qadiimiga ah waxay ahaayeen kuwo tayo wadajira. Tusaale ahaan, akhlaaqda la jecel yahay waxaa lagu abaalmariyaa barakeysan, iwm. Waxaa jira qayb iscelin ah oo lagu muujiyo xaaladaha shuruudaha lagu heshiiyay
Nooc ka mid ah dowladda federaalka waa deeqda dowladda dhexe. Dhexdeeda, awood sare, sida boqorka, ayaa siinaysa nimcooyin aan mudnayn. Axdiga noocan oo kale ah wuxuu aad ugu egyahay axdiga cusub. Ilaahay bini-aadamku wuxuu siiyaa nimcadiisa shuruud la'aan. Runtii, dib-u-heshiisiinta oo ay suurto gal ka noqotay dhiiga ku daadan axdiga weligiis ah wuxuu dhacay iyada oo aan Ilaah lagu tirinaynin xadgudubka aadanaha (1 Korintos 5,19). Iyadoo aan wax ficil ah ama fikir ah towbadkeenna ah lagu jirin, Masiixu innaga wuu noo dhintay (Rooma 5,8). Nimcadu way ka horreeysaa dhaqanka Masiixiyiinta.
Ka waran axdiyada kale ee Baybalka?
Aqoonyahanada Baybalka badankood waxay aqoonsadaan ugu yaraan afar axdi oo kale marka lagu daro Axdiga Cusub. Kuwanu waa axdiidihii Ilaah ee la jiray Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Daa'uud.
Waraaq uu u diray dadka aan Yuhuudda ahayn ee Masiixiyiinta ah ee Efesos, ayuu Bawlos u sharxay iyaga inay yihiin "shisheeye ka baxsan axdigii ballanka", laakiinse Masiixa ay hadda ahaayeen "kuwa mar ahaan jiray fogaa, oo u dhow dhiigga Masiixa" (Efesos 2,12: 13), oo ah dhiigga axdiga cusub, kaas oo u oggolaanaya dib u heshiisiinta dadka oo dhan.
Axdiyadihii Nuux, Ibraahim, iyo Daa'uud dhammaantood waxay ku jiraan ballanqaadyo shuruudood oo si toos ah loogu fuliyay Ciise Masiix.
Waxaan u malaynayaa inay la mid tahay wakhtigii Nuux markii aan ku dhaartay inaanu biyaha Nuux mar dambe dhulka dul mari doonin. Sidaas daraaddeed waxaan kuugu dhaartay inaanan mar dambe kuu xanaaqi doonin oo mar dambe idin caayay. Waayo, Rabbiga kuu naxariistaa wuxuu leeyahay, In kastoo buuruhu dhawaaqi doonaan, buurahaaduna way dhici doonaan, laakiinse nimcadaydu idinka kaa tegi mayso, oo axdigayga nabadaydana ma dhici doono. (Ishacyaah 54,9: 10).
Bawlos wuxuu caddeeyay in Masiixu yahay farcankii loo ballanqaaday Ibraahim, oo sidaas darteed rumaystayaasha oo dhan ay yihiin kuwa dhaxalka nimcada badbaadinta leh (Galatiya 3,15: 18). "Laakiin haddii aad Masiixa tihiin, waxaad tihiin wiilashii Ibraahim iyo kuwo dhaxla sida ballanka loo leeyahay" (Galatiya 3,29). Balanqaadyada federaalka ee qadka David (Yeremyaah 23,5: 33,20; 21) waxay ku rumoobeen Ciise, “xididkii iyo farcankii Daa'uud", boqorka xaqnimada (Muujintii 22,16).
Axdigii Muuse, oo sidoo kale loo yaqaan axdigii hore, wuxuu ahaa mid shuruud ku xidhan. Shuruuddu waxay ahayd in barakooyinka ay raaci doonaan haddii reer binu Israa'iil ay raacaan sharciga loo dejiyey ee Muuse, gaar ahaan dhaxalka Dhulkii Ballanqaadka, riyadii Masiixu ku dhammaystiray xagga ruuxiga: «Waana sababtaas isaguna waa dhexdhexaadiyaha axdiga cusub, dhimashadiisa kaas oo loo qabtay in lagu soo furto xadgudubyada ku hoos jira axdigii hore oo helay dhaxalka weligiis ah ee loo ballanqaaday (Cibraaniyada 9,15).
Taariikh ahaan, xaraashdu waxay sidoo kale kujireen calaamado muujinaya sii wadida kaqaybgalka labada qaybood. Calaamadahaasi waxay sidoo kale tixraacayaan Axdiga Cusub. Calaamadda axdiga Nuux iyo abuurisku waxay ahayd, tusaale ahaan, qaansoroobaad, iftiinka qaybinta midabka leh. Waa Masiixa oo ah nuurka dunida (Yooxanaa 8,12:1,4; 9).
Calaamadda Ibraahim waxay ahayd gudniin (Bilowgii 1: 17,10-11). Tani waxay ku xidhan tahay is waafajinta ka dhex jirta aqoonyahannada ku saabsan macnaha aasaasiga ah ee erayga Cibraaniga berith, oo loo tarjumay axdi ahaan, erey la xidhiidha goynta. Ereyga "gooyaa xirmo" ayaa wali mararka qaar la isticmaalaa. Ciise, oo ahaa farcankii Ibraahim, waxaa loo guday sidii caadadan ahayd (Luukos 2,21). Bawlos wuxuu sharxay in gudniinku aanu jir ahaan u ahayn qofka rumaysta, laakiin uu yahay mid ruuxi ah. Sida ku xusan axdiga cusub, “gudniinka qalbiga ayaa lagu dabaqaa ruuxa oo aan ku qorneyn xarafka” (Rooma 2,29:3,3; eeg sidoo kale Filiboy).
Sabtida sidoo kale waxay ahayd calaamada la siiyay Axdigii Muuse (Bilowgii 2: 31,12-18). Masiixu waa xasilloonida shaqooyinkeenna oo dhan (Matayos 11,28-30; Cibraaniyada 4,10). Deganaanshahani wuu jiraa oo waa joogaa: «Haddii Yashuuca nasasiin lahaa, Ilaah hadduusan maalin kale ka hadli doonin. Markaa weli dadka Ilaah ha nasto » (Cibraaniyada 4,8: 9).
Axdiga Cusub sidoo kale wuxuu leeyahay calaamad, mana aha qaansoroobaad ama gudniin ama sabti. "Haddaba Rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idin siin doonta: Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta, Magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu'eel." (Ishacyaah 7,14). Tilmaanta koowaad ee ah inaynu nahay dadka Ilaah ee Axdiga Cusub waa in Ilaah u yimid inuu na dhex joogo annagoo ah Wiilkiisa, Ciise Masiix (Matayos 1,21:1,14; Yooxanaa).
Axdiga Cusub sidoo kale wuxuu ku jiraa ballanqaad. Masiixu wuxuu yidhi, Bal eega waxaan idiin soo dirayaa wixii aabbahay ballan qaaday (Luukos 24,49), iyo ballan qaadkan oo ah hadiyadda Ruuxa Quduuska ah (Falimaha Rasuullada 2,33:3,14; Galatiya). Rumaystayaashu waxay ku shaabadaysan yihiin Axdiga Cusub "oo leh Ruuxa Quduuska ah oo loo ballanqaaday, kaasoo ah ballanqaadka dhaxalkeenna" (Efesos 1,13: 14). Masiixi run ah laguma gaarin gudniinka caadada ama waajibaadka taxanaha ah, laakiin wuxuu ku jiraa imaatinka Ruuxa Quduuska ah (Rooma 8,9). Fikradda axdigu waxay bixisaa ballaadh iyo qoto dheer oo waayo-aragnimo ah oo nimcada Ilaah lagu fahmi karo macno ahaan, tusaale ahaan, calaamad ahaan iyo isbarbardhig.
Waa kuwee xaraashka wali shaqeynaya?
Dhamaan axdiyada aan kor ku soo sheegnay waxaa lagu soo koobay ammaanta Axdiga Cusub ee Daa'imka ah. Bawlos ayaa tan tusaalaynaya markii uu isbarbar dhigaya axdigii Muuse, oo sidoo kale loo yaqaan axdigii hore, iyo kan cusub.
Bawlos wuxuu ku tilmaamay axdigii Muuse inuu yahay xafiiska keena dhimashada oo lagu xardhay dhagaxyo waraaqado ah " (2 Korintos 3,7: 2; eeg sidoo kale Baxniintii 34,27: 28), wuxuuna leeyahay inkasta oo uu mar qudha ahaa, "sharaftan laguma bixin doono sharaftaan sharaf badan," tixraac xafiiska xafiiska Ruuxa, si kale haddii loo dhigo, Axdiga Cusub (2 Korintos 3,10). Masiixu “waa ka sharaf weyn yahay Muuse” (Cibraaniyada 3,3).
Ereyga Griiga ee axdiga, diatheke, wuxuu siinayaa dooddan macno cusub. Waxay ku dartay cabirka heshiis, kaas oo ah dardaarankii ugu dambeeyay ama dardaaran. Ereyga berith looma adeegsan macnahaan Axdiga Hore.
Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa adeegsanaya kala sooca Giriiggan. Muuse iyo Axdiga cusub labadaba waa sidii dardaaran. Axdigii Muuse waa doonistii ugu horreysay, oo la kansalo markii kan labaad la qoro. "Waxa uu soo qaadayaa kan ugu horreeya si uu kan labaad u isticmaalo" (Cibraaniyada 10,9). "Maxaa yeelay haddii axdigii hore uu eed lahayn, meel looma dooneyn mid kale" (Cibraaniyada 8,7). Axdiga Cusubi "ma uusan ahayn axdigii aan awowayaashiin la dhigtay" (Cibraaniyada 8,9).
Sidaa darteed Masiixu waa dhexdhexaadiyaha "axdi ka wanaagsan kan ku saleysan ballamaha wanaagsan" (Cibraaniyada 8,6). Marka qof qoro dardaaran cusub, dhammaan wixii rabitaanno hore ah iyo xaaladooda, si kasta oo ay sharaf u leeyihiin, saameyntooda wey lumiyaan, hadda ka dib kuma xidhna oo waxay dhaxal u yihiin kuwa dhaxla. Isagoo leh: «axdi cusub», wuxuu caddeeyaa kii ugu horreeyay ee la daahiriyey. Laakiin wixii waqtigiisii ​​dhacay iyo ka badbaaday ayaa ku dhow dhamaadka. (Cibraaniyada 8,13). Sidaa darteed, qaababkii duugga ah looma baahna shuruudo ahaan si looga qayb qaato axdiga cusub (Anderson 2007: 33).
Dabcan: «Sababtoo ah marka dardaaran jiro waa inuu jiray geerida qofka sameeyey. Sababta oo ah dardaaranka oo kaliya wuxuu ku dhaqan gelaa geeri; wali lama dhaqangelin halka kan sameeyay uu wali nool yahay » (Cibraaniyada 9,16: 17). Sidaas daraadeed, Masiixu wuxuu dhintay oo waxaan helnaa quduus xagga Ruuxa. Sida doonistaasu tahay, waxaa quduus laynaga dhigaa mar iyo mar allabari oo loo bixiyo jidhka Ciise Masiix » (Cibraaniyada 10,10).
Qaynuunnada habka wax loo bixiyo ee ku jiray axdigii Muuse ma leh wax saameyn ah, «maxaa yeelay Suuragal ma aha in dembiyada laga qaado dhiigga dibiyada iyo riyaha» (Cibraaniyada 10,4), iyo si kasta oo marka hore la kansali lahaa si uu u isticmaalo labaad (Cibraaniyada 10,9).
Qof kasta oo warqad u qoray Cibraaniyada wuxuu aad uga walaacsanahay in akhristayaasheeda ama fahamkeeda ay fahmaan macnaha halista ah ee waxbarista Axdiga Cusub. Ma xasuusataa sida ay ahayd axdigii hore markii ay u ahayd kuwii diida Muuse? Ku alla kii jebiya sharciga Muuse, waa inuu dhintaa isagoo aan u naxariisan laba ama saddex markhaati. (Cibraaniyada 10,28).
Intee in le'eg ciqaab aad u culus ayaad u malayn doontaa kuwa ku halleeya wiilka Ilaah, oo u arka dhiiggii axdiga inuu nijaas yahay, oo uu isagu quduus kaga dhigay, oo uu caayo Ruuxa nimcada. " (Cibraaniyada 10,29)?
Axdiga cusubi wuxuu dhaqan galay maxaa yeelay Ciise baayaabihii dhintay. Fahmitaanka tan waxay muhiim utahay qofka rumaystaha ah maxaa yeelay dib u heshiisiinta aan helnay waxaa suurto gal ah oo kaliya "dhiiggiisa iskutallaabta dusheeda", dhiigga axdiga cusub, dhiigga Ciise Rabbigeenna (Kolosay 1,20).